Aogositra 8, 2018 Admin
Tselatra Network dia mampitombo ny 3000 nodes, fahaiza-fomba 100 BTC
Network ny tselatra manohy ny fanitarana haingana araka mandalo 3000 nodes amin'ny mainnet Network. Data avy amin'ny fanaraha-maso loharanom-1ml.com manamafy fa ny fahafahan'ny helatra Network dia nitombo 85% taloha 30 andro, Tselatra mainnet mitondra ny fitambaran'ny vola 97 BTC ($628,000).
Helatra dia voalohany nanaovan'ireo manodidina ny fanombohan'ny 2018 amin'ny mainnet teny, amin'ny fitomboana haingana amin'ny alalan'ny Q2. Amin'ny Mey 2018, fahafahana efa nitoetra somary ambany amin'ny fotsiny 18 BTC, mialoha ny mampivarahontsana fitomboana nanomboka tamin'ny Jolay 2018.
Fianarana avy Yale toe-karena, hoy Portfolios rehetra tokony hanao Bitcoin
Araka ny Profesora Aleh Tsyvinski, Bitcoin tokony ho anisan'ny iray portfolio-, na inona na inona ny olona iray na dia mafana fo momba ny cryptocurrency na tsia. Fa ny fanorenana ny iray tandrify ny portfolio-, Hoy ny toekarena Bitcoin tokony kaonty fara fahakeliny 6%. Ireo izay tsy mafana fo momba ny tontolo malaza indrindra cryptocurrency, tokony hanao 4%. Na inona na inona ny olona iray toerana ny raharaha, Bitcoin dia tokony ahitana farafahakeliny ny 1% ny portfolio-, for-karazana ny tanjona.
Ny fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe, Loza ary miverina ny Cryptocurrencies, koa dia manoritra ny endri-javatra miavaka tsara ny cryptocurrencies raha oharina amin'ny boloky hazo sy ny fatorana nentim-paharazana. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny tahan'ny Sharpe, Tsyvinski nampiseho fa dizitaly mampiseho vola mety ho ambony kokoa hiverina, na dia eo aza ny hampitombo ny volatility. koa, ny fianarana sy ny nanatsoaka hevitra fa ny mpampiasa vola vahana ny saina mpamily dia manan-danja ny vidiny.
$117M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao